ငွေရှာ'တာ အဓိကလား? 'ချွေတာ'တာ အဓိကလား? - True Money Myanmar
ငွေရှာ’တာ အဓိကလား? ‘ချွေတာ’တာ အဓိကလား?
ငွေရှာတာ အဓိကကျတယ်လို့ ယေဘူယျ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရပေမယ့် အခုကာလက အားလုံး ငွေရှာရတာ ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ ရှာရခက်တဲ့ကာလမှာ ချွေတာတတ်မှ အသက်ရှူချောင်မှာဖြစ်သလို ရလာတဲ့ဝင်ငွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးလည်း အကျိုးရှိအောင်သုံးတတ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အပိုမကုန်သင့်တာမကုန်ရအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေထဲကအချို့ကို TrueMoney မှ အကြံပြုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(မိသားစု လစဉ်အသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
ငွေရှာတာ အရေးကြီးသလို ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအသုံးစရိတ်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပြီးသုံးစွဲတတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လစဉ်ဝင်ငွေ နဲ့ ထွက်ငွေ သမမျှတစွာသုံးစွဲပြီး အပိုစုဆောင်းနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာနိုင်ဖို့
– နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်အား စာအုပ်(၁)အုပ်ထဲတွင် စာရင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ကို လုပ်ပါ။
– လိုချင်တာတွေထက် တကယ်လိုအပ်တာတွေကိုသာ ဝယ်ယူပါ။
– အသုံးတည့်တာချင်းတူရင် ဈေးတန်တာကို ရွေးသုံးပါ။
– အမြဲသုံးရမယ့်ပစ္စည်းမျိုးကို များများ(၁)ခါတည်း ဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။(ဥပမာ– ဆန်၊ ဆီ၊ ဆပ်ပြာ)
– မိသားစုကုန်နိုင်သလောက်ကိုပဲ ချင့်ချိန်ပြီး ချက်ပြုတ်ပါ။
ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှာ ကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်နေထိုင်နိုင်ခြင်းဟာလည်း ငွေကိုချွေတာခြင်းပါပဲ။ မိသားစုဝင်အားလုံး အမြဲကျန်းမာစေဖို့အတွက်
– အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပါ။
– တစ်နေ့ကို လူကြီးတစ်ယောက်အတွက် အနည်းဆုံး ရေ(၂)လီတာလောက် သောက်ပါ။
– ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့စဉ်လုပ်ပါ။
– ပူပြင်းတဲ့ကာလကို ရောက်လာပြီမို့ အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်သင့်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် အပူအစပ်တွေကို လျော့စားသင့်တယ်။
– ပြင်ပအစားအစာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။
အလိမ်အညာတွေများတတ်တဲ့ကာလမို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအမှားတွေ မဖြစ်ရလေအောင် သတိထားရပါမယ်။
– နည်းနည်းရင်းပြီး ‘စ‘လို့ရမယ့် စီပွားရေးမျိုးကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်သင့်တယ်။
– ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုရှိမယ်၊ လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုလောက် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ TrueMoney နဲ့ လက်တွဲပြီး TrueMoney အေးဂျင့်တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လို့ရပါတယ်။
(၂၄)နာရီအတွင်း အေးဂျင့်ဖြစ်ဖို့ ဒီလင့်ခ်ကနေ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
စည်းစနစ်နဲ့‘သုံး‘ အောင်မြင်ဆုံးဘဝတွေ အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ..